Ciidamadii Haramcad Ee Ku Sugnaa Baledweyne, Ayaa Maanta Loo Soo Qaaday Muqdisho – Great Banaadir
Ciidamadii Haramcad Ee Ku Sugnaa Baledweyne, Ayaa Maanta Loo Soo Qaaday Muqdisho
Maanta waxaa Xarunta Gobolka Hiiraan ee Baledweyne laga qaaday Ciidamo katirsanaa Haramcad oo ku sugnaa Magaalada Baledweyne Shantii Bilood ee lasoo dhaafay, kuwaas oo Diyaarad ka qaaday Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee Magaalada Beledweyne.
Ciidamada Maanta laga qaaday Baledweyne ayaa tiro ahan gaarayay ilaa 100 Askari, kuwaas oo ay Dowladda Soomaaliya Bilawgii Sanadkan ay u keentay Magaalada Baledweyne iney ka qeyb qaataan Sugida Amaanka Goobaha lagu waday iney ka qabsoomaan Doorashooyinka Dalka.
Ciidamadan ayaa shan bilood kadib, dib loogu celiyay Magaalada Muqdisho. Lama oga Sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in Ciidamadan laga qaado Magaalada Baledweyne, balse waxay qeyb ka noqonayaan Ciidamo Labadii Maalin ee u dambeysay Dowlada kasoo qaadeysay Gobolada Galgaduud, Gedo iyo Hiiraan.
Qaaditaanka Ciidamadan ayaa kusoo beegmeysa Xilli Xaalada Siyaasadeed ee Dalka noqotay mid aad u cakiran, Dagaalo culusna ay Magaalada Muqdisho ku dhexmareen Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamo kale oo kasoo horjeeday Muddo Kororsiga Madaxweyne Farmaajo.
Xildhibaanadii Laga Joojiyay Kulamada Golaha Baarlamaanka Oo Go’aano Soo Saaray